Zimbabwe: Govt Terminates Zuva and Glow Petroleum Licenses - allAfrica.com
Zimbabwe: Govt Terminates Zuva and Glow Petroleum Licenses
Government has with immediate effect withdrawn operating licenses for Zuva and Glow Petroleum which it says have been overpricing fuel.
"We have not withdrawn its whole operating license as such, but we have taken licenses at three of its service stations because the companies were overcharging clients prices above the ZERA (Zimbabwe Energy Regulatory Authority)... " he said.
"Following an update report by the Ministers of Industry and Commerce; and Health and Child Care, Cabinet noted with satisfaction indications that the availability of basic commodities on the market was gradually improving, in the aftermath of the amendment of SI 122 of 2017," she said.
Last week government was forced to open the country's borders and allow imports from neighboring countries after shops ran out of stock citing foreign currency shortages which have continues to elude the market for the past few years
On the issue of agriculture inputs, Minister Mutsvangwa said; "following the meeting between President Emmerson Mnangagwa and captains of industries yesterday, there will be an inclusive approach which will see the need to engage seed and fertilizer suppliers in order to guarantee the affordability of agricultural inputs especially seeds and fertilizers."
Mutsvangwa said the Mnangagwa's meeting with seed suppliers would see the continued review of seed prices.